भारतले सिमा मिचेर सडक बनायाे अन्तराष्ट्रिय अदालतमा मुद्धा दिएको खोई ? : सांसद सुवाल - Nepalpati.com - News Portal from Nepal, Politics, Business, Science, Social, Sport, Ecomony, Entertainment, Movie, Nepali Model, Actor, Actress, Interview| Nepal Pati
भारतले सिमा मिचेर सडक बनायाे अन्तराष्ट्रिय अदालतमा मुद्धा दिएको खोई ? : सांसद सुवाल
अमेरिका र भारत मिलेर नेपाललाई एमसीसी सम्झौता गराउँदैछ
काठमाडौं । प्रतिनिधि सभाको बैठकमा बोल्दै सांसद प्रेम सुवालले दक्षिण एसियामा भारतको नीति आक्रम र शत्रुतापूर्ण रहेको बताएका छन ।
आइतबार परराष्ट्रमन्त्री प्रदिप ज्ञवाललीले सार्वजनिक महत्वको प्रस्ताव माथि छलफलका क्रममा प्रश्न गर्दै सांसद सुवालले बेलायती उपनिबेशको प्रभावमा रहेको भारतले अहिले अमेरिकी साम्राज्यको प्रभावमा रहेको बताए । उनले सन १९६२ मा अमेरिकाले भारतलाई चीन विरुद्ध लडायो,अमेरिकाले नै भारतबाट बंगालादेश टुक्रा गर्न र सिक्किम लग्न लगाएको दाबी गरे ।
साथै अहिले अमेरिका र भारत मिलेर नेपाललाई एमसीसी सम्झौता गराउँदैछ । यसले कुनकुन देश समाप्त हुने हो ।सरकारको सचेतता खोई ? सन २००८ देखि भारतले नेपाली भूमी मिचेर निर्माण गरेको सडकबारे सरकारले के के गरेको छ ? अन्तराष्ट्रिय अदालतमा मुद्धा दिएको खोइ भन्दै प्रश्नको जवाफ मागेका छन ।